Messi oo hogaaminaya kacdoon ka dhan ah in kulamada qaar ee La Liga lagu ciyaaro dalka Mareykanka – Gool FM
Messi oo hogaaminaya kacdoon ka dhan ah in kulamada qaar ee La Liga lagu ciyaaro dalka Mareykanka
(La Liga) 22 Agoosto 2018. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa isku dayaya inuu hogaamiyo dadka kasoo hor jeeda in kulamo qaar ee horyaalka La Liga lagu ciyaaro dalka Mareykanka, sida ay ku warameyso Mail Online Sport.
Toddobaadkii hore maamulka horyaalka La Liga ee dalka Spain ayaa waxay ku dhawaaqeen in kulamo qaar ee ka tirsan La Liga lagu qaban doono dalka Mareykanka, heshiiska ayaana socon doono mudo dhan 15 sano ee hada soo aadan.
Lionel Messi ayaa ka mid ah hogaamiyaasha kooxaha horyaaka dalka Spain ee lagu wado inay gaaraan xarunta dhexe ee maamulka La Liga, si ay kaga soo hor jeestaan go’aankan.
Si kastaba Madaxweynaha maamulka horyaalka La Liga ee dalka Spain Javier Tebas ayaa helaya cabashooyin badan ee la xiriira inuusan cidna kala tashanin go’aanka noocan oo kale ah kahor inta uusan si rasmi u gaarin.
Angel Di Maria oo qarka u saaran inuu heshiis cusub u saxiixo PSG
Kooxaha reer Madrid oo isku haysta saxiixa daafaca Chelsea ee Marcos Alonso